September 2021 - ပညာ ပါဝါ
တ႐ုတ္ျပည္ထက္ဝက္ေက်ာ္ မီးျပတ္ေလၿပီ……. ေဒသခံေတြ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေနရ
တ႐ုတ္ျပည္ထက္ဝက္ေက်ာ္ မီးျပတ္ေလၿပီ……. ေဒသခံေတြ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေနရ ျပည္နယ္ (၃၁) ခုရွိရာမွာ (၁၆) ခုမွာ မီးေတြအျဖတ္ခံေနရလို႔ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြ အခက္ေတြ႕ေနၾကရပါၿပီ။ သံေခ်ာင္း၊ အလူမီနီယံနဲ႔ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံေတြရပ္ကုန္လို႔ ပစၥည္းေဈးေတြ က္ကုန္ပါၿပီ။ ကမၻာ့ေဈးကြက္ကမွာထားတဲ့ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြ၊ ကားအပိုပစၥည္းေတြလည္း အခ်ိန္ပိုၾကာၿပီးမွ ရပါလိမ့္မည္။ လမ္းမေတြထက္က မီးပြိဳင့္ေတြပါ မီးပ်က္ကုန္လို႔ ကားေတြဒုကၡေရာက္ၾကာပါတယ္။
မြန်မာနိုင်ငံကို မင်းအောင်လှိုင် ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းလား မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်ခြင်းလား…
မြန်မာနိုင်ငံကို မင်းအောင်လှိုင် ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းလား မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်ခြင်းလား… မြန်မာနိုင်ငံကို မင်းအောင်လှိုင် အနေနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းဟာ အာဏာသိမ်းမှု တထစ်ချ အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူဟာ “ပေါက်တဲ့နဖူး၊မထူးတော့ဘူး” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်ခြင်းတခုပါ။တကယ်တော့ သူထင်ထားတာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ဖို့ သူ့အနေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတာ အများကြီးပါ။ နှင်းဆီပါတီတို့၊PPP ပါတီတို့ဆိုတာ NLD
အထည်ကြီးပျက် သာကောကြီး ရဲ့ ကွယ်ဝှက်ကြွေးမြီစုစုပေါင်းက နိုင်ငံ့GDPတန်ဖိုးပမာဏရဲ့ထက်ဝက်လောက်အထိ ရှိနေ……..
အထည်ကြီးပျက် သာကောကြီး ရဲ့ ကွယ်ဝှက်ကြွေးမြီစုစုပေါင်းက နိုင်ငံ့GDPတန်ဖိုးပမာဏရဲ့ထက်ဝက်လောက်အထိ ရှိနေ…….. တရုတ်စီးပွားရေးက အချ်ိန်တိုကာလအ တွင်း၌ လျှင်မြန်စွာနဲ့ မြင့်တက်လာခဲ့တယ် ။အမေရိကန်၊ဂျပန်တို့ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ရှိစေခဲ့တဲ့နှုန်းထက် လျှင်မြန်တဲ့ နှုန်းနဲ့ မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ အစောပ်ိုင်း တုန်းက သိခဲ့စဉ်က အတော်အထင်ကြီးမိခဲ့ တယ်။ တရုတ်လော်ဘီ သတင်းမီဒီယာကြီး တွေကလည်း တရုတ်ရဲ့
Covid – 19 ပထမလှိုင်း ဒုတိယလိုင်းကတည်းက တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်ဟု စစ်ကောင်စီပြော
Covid – 19 ပထမလှိုင်း ဒုတိယလိုင်းကတည်းက တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်ဟု စစ်ကောင်စီပြော လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးထက် နိုင်ငံသာယာဝပြောရေးနဲ့ ဖူလုံရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်မယ်လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၃ဝရက်) နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးထက် နိုင်ငံသာယာဝပြောရေးနဲ့
မြန်မာ လူမျိုးတို့အတွက် မျက်နှာဖုံး ခွာချပွဲ ( သို့မဟုတ် ) နွေဦးတော်လှန်ရေး
မြန်မာ လူမျိုးတို့အတွက် မျက်နှာဖုံး ခွာချပွဲ ( သို့မဟုတ် ) နွေဦးတော်လှန်ရေး နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ “မျက်နှာဖုံး ခွာချပွဲ” လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ လူတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ကွာကျကုန်တယ်။ ဘယ်လိုမှ ဟန်ဆောင်လို့ မရတော့ဘူး။ သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ်မာ ကွဲပြားသွားတယ်။ ဘယ်သူတွေက သတ္တိရှိပြီး စွန့်လွှတ်အနစ်နာ
မိမိတို႔လက္ထက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း၊ ေရႊေစ်းကိစၥ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္၍ တာဝန္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းဆို “ေဒၚလာေစ်း၊ ေရႊေစ်းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပရင္ အက်ယ္ႀကီးရွင္းျပရမွာေပါ့။ ပထမ ကိုဗစ္လွိုင္း ကာလကတည္းကအတိုင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ားေပါ့။ မိမိရဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပည္ပသြင္းကုန္ေတြ မ်ားျပားလာတာ ရွိတယ္။ ဒုတိယလွိုင္းကာလမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ဒီၾကားထဲမွာ ျပည္ပ ျပင္ပ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့
NLD အစွန်းရောက်တွေ မိမိတို့လုပ်ရပ် အောင်မြင်မယ်ထင်ရင်ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ဟု စကစ ပြန်ကြားရေးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်‌းပြောကြား ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
NLD အစွန်းရောက်တွေ မိမိတို့လုပ်ရပ် အောင်မြင်မယ်ထင်ရင်ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ဟု စကစ ပြန်ကြားရေးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်‌းပြောကြား ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG)အား လူငယ်တွေကို မှောက်ပင့်သွေးထိုးပေးနေခြင်းနှင့် အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလုပ်နေကြောင်း စွတ်စွဲပြောကြားပြီး ၎င်းလုပ်ရက်တွေ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ကိုယ်တိုင်အရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ပါဟု နေပြည်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားလိုက်သည်။ “ပြောချင်တာကတော့ ဒီ NUG အစွန်းရောက်တွေအနေနဲ့
ဘာျပစ္မႈမ်ားမက်ဴးလြန္ထား၍ မိမိတြင္ အျပစ္မရွိဟု တရားခြင္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆို
Too Far | 29/09/2021
ဘာျပစ္မႈမ်ားမက်ဴးလြန္ထား၍ မိမိတြင္ အျပစ္မရွိဟု တရားခြင္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သီးသန႔္တရား႐ုံး၊ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးေအာင္တို႔ကိုစြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ (အမ်ားျပည္သူတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစမႈ) အမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၅၀၅-ခ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ေခၚသက္ေသႏွစ္ဦးကို
အကြမ်းဖက် စစ်တပ် အာဏာစသိမ်း အချိန်မှာ”အနီတွေ ခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ”ပြောခဲ့ကြ ၊ လှောင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ အခုချိန်မှာတော့……..
အကြမ်းဖက် စစ်တပ် အာဏာစသိမ်း အချိန်မှာ”အနီတွေ ခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ”ပြောခဲ့ကြ ၊ လှောင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ အခုချိန်မှာတော့…….. “မှတ်လောက်သားလောက်အောင် လုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ””ဖိပြီးနှိပ်ကွပ်ပြလိုက်ရင် ငြိမ်သွားမှာပါ”ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းတာကို ထောက်ခံခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့စိတ်ထဲကဒီလို…. NLD က မဲခိုးတယ်မဲခိုးလို့ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ် သိမ်းသင့်တယ်စစ်တပ်က လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးမယ်အဲဒီအခါကျရင် ငါတို့နိုင်မယ် နိုင်ရင်အာဏာပြန်ရပြီ( ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြီး ဝင်မပါခိုင်းတော့ဘူး )